नेसनल प्याब्सनको नेतृत्व लिन तयार छुः पाण्डब हमाल (भिडियो) | KTM Khabar
नेसनल प्याब्सनको नेतृत्व लिन तयार छुः पाण्डब हमाल (भिडियो)
२०७४ कार्त्तिक ६ गते २३:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) को छैठौँ महाधिवेशन यहि कार्तिक १७ देखी १९ गतेसम्म चितवन जिल्लाको सुन्दर नगरी सौराहामा हुँदै छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केटिएम खबर डट कमका लागि श्याम कार्कीले एनप्याब्सनका उपाध्यक्ष एवं छैठौँ महाधिवेशनका अध्यक्ष आकांक्षी पाण्डब हमालसंग विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
पाण्डब सर यहाँलाई स्वागत छ ।
अहिले हामी एनप्याब्सनको छैठौ महाधिवेशनको संहारमा छौँ । त्यस अन्तर्गत हाम्रा तमाम साथीहरुसंग जल्दा–बल्दा विषयहरुलाई लिएर मेची कालीको भ्रमणबाट अहिले काठमाडौँ आएको छु । यही कुरामा म अहिले केन्द्रित छु ।
छैठौ महाधिवेशनको तयारी कस्तो हुदै छ ?
हामी प्रथम महाधिवेशनबाट पाचौ महाधिवेशनसम्म आइरहदा नेसनल प्याब्सनको छुट्टै इतिहास बनेको छ । छैठौँ महाधिवेशनको संहारमा आउदा नयाँ नेतृत्वमा म पनि आकांक्षी रहेको छु । यो कुरा भन्नका लागि म पछी पर्न हुन्न किनभने हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षले आफ्ना तमाम कुरा मिडियामा राखी सक्नु भएको अवस्था छ । त्यही सन्दर्भ जोडेर अहिलेको सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन एनप्याब्सन एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । देशले अहिले संघियताको सवालमा, प्रदेशको सबै सवालमा आफ्ना कुराहरु ल्याइरहेको छ । हाम्रो छैठौ महाधिवेशन पनि समय सापेक्षित औचित्यपुर्ण अवस्थामा छ । हामीले त्यहा जेन्युन कुराहरु उठाउनु पर्छ । त्यो उत्थान गरी सकेपछी आउने नेतृत्वले त्यी कुराहरुलाई सबल र सक्षम रुपमा निर्धक्कका साथ लड्न सक्ने किसिमको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसका लागि म तयारी भएको अवस्था हो ।
लगभग नेसनल प्याब्सनको बिस वर्षको इतिहास र एक्काइस वर्षमा प्रवेश गरिरहदा म एउटा तदर्थ समितिको केन्द्रिय सदस्यमा रहेर, त्यसपछी निर्वाचित भएर दुई चोटी केन्द्रिय सचिव भएको अवस्था र केन्द्रिय उपाध्यक्ष भइसकेको हुँदा लामो अनुभव मसंग छ । मलाई लाग्छ मेचीदेखी महाकालीसम्मका मोफसलका विद्यालयहरुदेखी लिएर सिटीका विद्यालयका समस्याहरु र सम्पुर्ण कुराहरु मैले अवलोकन गरेको छु । हरेको विद्यालयहरुको समस्यासंगै त्यो भित्र रहेका आम–अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक साथीहरुको समस्याका जल्दा–बल्दा कुराहरुलाई लिएर आफु अगाडी बढ्ने ठानेको छु र संगठन भित्र लामो समयदेखी काम गरेको हुँदा पनि अब मैले नेतृत्व लिएर अझ केही कुराहरु दिन सक्छु कि भन्ने लागेर आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडी बढाएको छु ।
शिक्षा क्षेत्रमा यहाँले दिनु भएको योगदानहरु के के छन् ?
शिक्षा क्षेत्रमा म लागिरहदा मैले आफुले सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयमा गरिब, जेहेन्दार, अत्यन्तै निम्न वर्गीय (मुसहर, डुम, चमार) का बालबालीकाहरु पनि सुलभ रुपमा अध्यन गराए । उनीहरु अहिले नेपाल सरकारको सेवामा पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ । त्यसबाट म अत्यन्तै खुशी छु । मेरो पेशा प्रती म सम्मान गर्न चाहन्छु । त्यसै गरी म संगठनमा आई सकेपछी संगठनमा रहेका तमाम विद्यालयहरुका साथीहरुको संरक्षण र संम्बद्र्धनका लागि मैले आफ्नो भुमिकाबाट, मैले पाएको जिम्वेवारीबाट मैले रत्तिभर पछी नपरीकन हरेका ठाउँमा उहाँहरुको समस्यालाई समाधान गर्न प्रत्येक जिल्लाहरुमा भौतीक रुपमा उपस्थित भएको छु । मलाई जुन रुपमा राष्ट्रिय अध्यक्षले जिम्वेवारी दिनु भयो र त्यो जिम्वेवारलाई मैले पुर्ण रुपमा निभाएको छु । अधिकांश जिल्लाहरुमा म आफै गएर संगठन निर्माण गरेको छु । म स्मरण गराउन चाहन्छु, तेश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म सचिवमा निर्वाचित भई सकेपछी मैले त्यतिखेर पनि मेची–महाकाली भ्रमण गरेर देशका कुना–कुनामा पुगेर निजी विद्यालयको औचित्य बुझाएर र निजी विद्यालयको संरक्षण, सम्बद्र्धन मात्र नभएर स्तरीय शिक्षा कसरी दिनु पर्छ ? भन्ने सवालमा पनि मैले आफ्ना कुराहरु राखेर संगठन प्रती आवद्ध गराएका साथीहरु धेरै छन् ।
पाण्डब हमालसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः